Duufaan iyo roobab mahiigaan ah oo Khasaare ka gaystay Puntland iyo Somaliland - BBC News Somali
Duufaan iyo roobab mahiigaan ah oo Khasaare ka gaystay Puntland iyo Somaliland
Image caption Sawir hore daadad iyo dabeylo ku dhuftay Puntland
Roobab mahiigaanno ah ayaa khasaare ka gaystay deegaanno ka tirsan maamul goboleedka Puntland iyo Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland 12 kii saac ee la soo dhaafay, sida ay shaacisay Qaramada Midoobay.
Labo ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen deegaannada Bari ee Puntland ka dib markii ay daadad la tageen, sida uu BBC-da u xaqiijiyay Agaasimaha Guud ee Wasaarada Arimaha Gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur Juba.
Duufaan halis ah oo ku soo fool leh dhul xeebeedka Soomaalida
Hay'adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan Qaramada Midoobay ee FAO ayaa sheegtay in la filayo in ay mahiigaannada ka da'aya qaybo ka mid ah Puntland iyo Somaliland ay ka sii daraan labada maalmood ee foodda inagu soo haya.
Shalay ayay ahayd markii digniinta laga soo saaray duufaanta iyo roobabka mahiigaanka ah.
Fatahaad khasaare ka gaysatay Qabri-dahar
Dhanka kalana waxaa hoos u dhacay roobabka ka da'aya Juba, Shabeelle iyo waliba dhulka buuralayda ah ee Itoobiya.
Daadad iyo fatahaado badan oo arrintaas ka dhashay ayaana khasaare badan ka gaystay deegaanno badan oo Soomaali ah.